आईओएस .7.1.1.१.१ ले आईफोनमा ब्याट्रीको जीवन सुधार गर्दछ आईफोन समाचार
आईओएस .7.1.1.१.१ ले आईफोनमा ब्याट्रीको जीवन सुधार गर्दछ
सम्भवतः आईओएस of को आगमनको साथ, हामी सबै नयाँ सुविधाहरू द्वारा उडायौं। विशेष गरी किनभने हामीले यो नदेखुन्जेल एप्पलले हामीलाई लामो प्रतिक्षा गरेका थिए। जे होस् सबै राम्रो र सुन्दर पृष्ठभूमि मा पछि गए जब अपरेटिंग प्रणाली को साथ पहिलो समस्या देखा पर्‍यो। पछि यो आउनेछ iOS 7.1, जुन सैद्धान्तिक रूपमा आईओएस following र निम्न उपवर्तनमा पत्ता लगाइएका बगहरू समाधान गर्न सिर्जना गरिएको थियो। तर त्यसबेलासम्म कपर्टिनोले जेल अफ ब्रेक रोकिसकेको छ र धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई अद्यावधिक हुने सम्भावना छोडेको छ। अझै, केही असफलताहरू अझ जटिल थिए, जस्तै स्वायत्तताको मामला। अब हामी आईओएस .7.1.1.१.१ मा छौं
धेरै त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरू थिए जसले आईओएस .7.1.१ मा अपडेट गर्दा रिपोर्ट गरे कि उनीहरूको आईफोनले त्यस्तै ब्याट्री लाइफ रोकेको छ। यदि हामी ध्यानमा राख्छौं कि आईफोन यस सम्बन्धमा बाहिर देखिँदैन, नेटवर्क मा नाटक र प्रदर्शन चाँदीको थाली मा सेवा थियो। तर एप्पल सामाजिक नेटवर्कमा हुने सबै कुरा र यसका अपडेटहरू द्वारा बनाइएका कडा आलोचनाहरूबारे अनजान देखिन्छ। वास्तवमा, यस पटक तिनीहरू पहिलो देखि टाउको मा कील हिट गरेको देखिन्छ आईओएस .7.1.1.१.१ परीक्षण गर्दै देखाउनुहोस् कि यसले आईफोनमा ब्याट्रीलाई धेरै सुधार गर्दछ।
सुरुमा एप्पलले माइनर मानेको यो अपडेट प्रयोगकर्ताहरु बीच एकदम राम्रो पाइएको छ। यो स्थापना गर्न प्रारम्भिक विफलता पछि, एक पटक स्तरवृद्धि भएपछि, सबैजनाले आफ्नो टर्मिनलको स्वायत्ततामा परिवर्तन देख्दछन्। र यसको मतलब तिनीहरू कम से कम बगको रिजोलुसनसँग खुशी हुन सुरु गरिरहेछन् किनकि आईओएस to को तुलनामा आईओएस .7.1.१ बिग्रेको कारण, जति सक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्‍यो। अन्त मा, र कम्तिमा क्षण को लागी, आईओएस .7.1.1.१.१ काम गर्दैछ। एकदम खराब नराम्रा प्रयोगकर्ताहरू यसलाई देख्न सक्दैनन्। यद्यपि आईओएस x.० को तुलनामा यस सन्दर्भमा कुनै ठूला परिवर्तनहरू छैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस .7.1.1.१.१ ले आईफोनमा ब्याट्रीको जीवन सुधार गर्दछ
मलाई मात्र अपील गर्दछ केवल कुञ्जीपाटी अक्षरहरू बोल्ड गर्ने विकल्प हुन्छ, जुन धेरै राम्रो छ, र एनिमेसनहरू। जसले धेरै राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छ। आईओएस In.०. In बन्द गर्दै अनुप्रयोगले आईप को साथ आधा सेकेन्ड लिनुपर्दछ, mother's.१.१ एनिमेशनको साथ मेरी आमाको आईप my आईप than भन्दा छिटो जान्छ। मलाई शंका छैन कि 7.0.6.१.१ एकदम राम्रोसँग गइरहेको छ, तर यदि मैले अपडेट गरेँ भने मैले धेरै सुविधाहरू गुमाएँ। जे भए पनि, हेर्नको लागि तिनीहरू 5.१.१ को लागि जेलरोड बाहिर लिन्छन्। के तपाईलाई कुनै चिम्का थाहा छ जसले किबोर्डका लागि अक्षरहरू बोल्डमा राख्दछ?
फिलिपलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते फिलिप। यस चिमटा (कलरकेयबोर्ड) को साथ तपाईले आफ्नो मनपर्ने कुञ्जीपाटी राख्न सक्नुहुन्छ।
पहिले हेर्नुहोस् कि यसले तपाईंको उपकरण र तपाईंमा भएको संस्करणको लागि राम्रो काम गर्दछ। मलाई यकिन छैन भने यदि स्प्रिंगटमाइज मा सेक्शन छ र कलरकिबोर्ड जस्तो गरीन्छ। मलाई आशा छ मैले सहयोग गरेको छु।
भिक्टर टेरेन्स भन्यो
7.1.1.१.१ को अपडेट ब्याट्रीको टिकाउपनमा परिवर्तन महसुस गर्न को लागी, यो सेलफोन वा आईट्यून्स:3को साथ कम्प्युटरबाट गर्न सिफारिस गरिएको छ?
भिक्टर टेरोनेसलाई जवाफ दिनुहोस्
समाचारको अनुवाद डरलाग्दो छ।
म अनादर हुन चाहन्न तर…। यो एक मिठो लेख हो र ढिलो पनि भयो। यस प्रकारका समाचारहरू २- days दिनपछि सुरू हुन्छन् र internet० इन्टरनेट पृष्ठले पहिले नै यो जारी गरिसक्यो।
म विवाद सिर्जना गर्न चाहन्न, तर म जेएमसँग सहमत छु। अघि, यो ब्लग मेरो मनपर्ने मध्ये एक थियो, तर केहि समयको लागि, उनीहरूले प्रकाशित गरेको समाचार अरूको तुलनामा ढिला हुन्छ। प्रत्येक चोटि मैले पृष्ठमा रुचि हराउन ...
अल्बर्टो ब्लाज्डिमिर भन्यो
राम्रो ब्लग? मँ भन्छु किनकि मैले यो मात्र देखेको छु। खैर, यदि तपाईंले ब्याट्रीको साथ अपडेट याद गर्नुभयो भने।
अल्बर्टो ब्लाज्डिमिरलाई जवाफ दिनुहोस्
यस अपडेटको साथ यो मेरो लागि भयानक छ यद्यपि फेसबुकले राम्रोसँग राम्रो काम गरेन यदि म पृष्ठ तल झार्न चाहन्छु भने यो माथि जान्छ र त्यसैले सबै कुराको साथ पनि स्पर्श पागल भयो 😭
नमस्कार समाचारको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
म जान्न चाहन्छु कि मेरो आईफोन with को साथ जुन पहिले नै २ बर्ष पुरानो हो जसमा मसँग bre.०.१ संस्करण छ जेल्रेक संग यो सुझाव दिइन्छ 4.१.१ सम्म जान, यो तरल पदार्थ हुनेछ वा यो धेरै लाग्नेछ आईफोन??
म .7.1.१ मा ब्याट्रीको जीवनको आलोचना गर्थें तर नयाँ अपडेटको साथ यो होइन कि मैले यसलाई सुधार गरेको छु, यो केवल अर्को विश्व हो। यो बिहान :17::53 छ र यो %:०० देखि जारी रहन्छ, 84:०० देखि। यो सत्य हो कि आज मैले यसलाई बोराउनको लागि प्रयोग गरेको छैन, तर भिन्नता अतुलनीय छ, .8.१ को साथ मलाई दिनको दुई चोटि रिचार्ज गर्नुपर्‍यो। धेरै राम्रो छ।
नमस्कार, तपाईसँग के आईफोन छ?
Bluethooh को माध्यम बाट फाईलहरू पठाउँदा अन्य स्मार्टफोनहरूमा उनीहरू उत्तम हुन्छन्;
इसहाक ब्लुटुथ चीज कहिले पनि सम्भव हुँदैन
Ss .4.१.१ मलाई 7.1.1 जी र संकेतसँग समस्या छ कहिलेकाँही मसँग कुनै स no्केत हुँदैन र म कुनै सेवा पाउँदिन…। कोही त्यस्तै भयो?
आईफोन ले यसलाई आईओ to मा अपलोड गर्नुहोस् तर very आईफोन for को लागि एकदम ढिलो छ
मेरो फोन ss ले चार्जर लिदैन तर यो ०% सम्म पुग्दैन किनभने यो हुनेछ ??????
यो अद्यावधिक गर्न यसले मलाई कोड सोध्दछ, पहिले कहिले पनि होइन
मैले एउटा आईफोन S एस अपडेट गरें र यसले मलाई एक कोड सोध्दछ जुन मसँग सुरक्षा थिएन। सहयोग ... !!!!
लक कोड राख्नुहोस्
तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्
स्यान्टियागो पास्कुअल @ (@ स्पेसिक) भन्यो
मेरो लागि बैटरीको आयु कम छ, आईओएस .7.1.1.१.१ को साथ कम। म एक सम्मानजनक प्रतिशतको साथ राती अब आउनु भन्दा पहिले र यसलाई कम प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले म दिउँसो / रातमा पुग्नै सक्दिन
स्यान्टियागो पास्कुअललाई जवाफ दिनुहोस् @ (@ स्पेसिक)
यदि अब बिहान देखि दिउँसो म बढ्छु भने मैले यो लोड गर्नु पर्छ
यो पहिले भन्दा कम रहन्छ। अद्यावधिकसँग के सम्झौता…>: - (((
पावर बटन समस्याहरूको साथ आईफोन for को लागि अतिरिक्त रेटिंग
ट्यापटो अनलक:: आईओएस Dev उपकरणहरू (सिडिया) ट्याप गरेर अनलक गर्नुहोस्